Alicia Keys - VipCasting.cz
Alicia Keys, olo-malaza, malaza, mpilalao, mpilalao sarimihetsika, mpilalao sarimihetsika, mozika, tantaram-piainany, mpihira, mpihira
Alicia Keys, amin'ny anaran'ilay renim-pianakavianaAlicia J. Augello-Cook(* 25 January 1981, Manhattan, New York, USA) dia mpihira amerikanina R & B sy fanahy, mpamorona, pianista, mpamokatra, filantropista ary mpilalao sarimihetsika sy mpanoratra. Alicia dia mpanakanto fanta-daza izay namidiny 28 an-tapitrisany an-tapitrisany sy singa maro ary nahazo mari-pankasitrahana maro - Vidiny efatra ambin'ny folo Grammy, elefanta Billboard Music Awards ary telo American Music Awards.
Nateraka teratany Irlandey-italianina Terri Augello sy ny rainy Jamaikana Craig Cook tany New York, Manhattan izy. Terri dia mpilalao sarimihetsika sy mpanampy tao amin'ny orinasa mpanao lalàna iray, ka nihalehibe tao anatin'ny tontolo mahantra tamin'ny antsoina hoe Hell's Kitchen izy tao amin'ny efitra tokana iray. Tao amin'ny 1985, niaraka tamin'ny ankizivavy maro hafa, nomena fahafahana hanao anjara andraikitra kely ao anatin'ny ampahany amin'ilay andian-dahatsoratra izyNy Cosby Show. Nandritra ny fito taona dia nanomboka nilalao pianô izy ary nilalao ny kilasy avy amin'i Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart ary Frédéric Chopin ankafiziny. Tamin'ny efatra ambin'ny folo no nanoratany ny hira voalohany "Butterflyz", izay nosoratany tao amin'ny alahelony voalohany. Nipoaka ny ray aman-dreniny raha mbola kely izy, noho izany dia ny reniny ihany no nampianarina hanohana azy amin'ny fampivelarana ny talentany mozika. Tao amin'ny 2005, nitatitra ny gazety fa nanandrana nampihavana ny rainy izy.Saingy nandà izany izy ary niteny fa diso ny teniny.
Tao anatin'ny enina ambin'ny folo taona ny sekoly vita "Nanao Professional Sekoly Arts" Ary na dia efa niaiky fa Columbia University amin'ny vatsim-pianarana, dia nanapa-kevitra fa hanohy ny mozika, fa asa. Nanao sonia fifanarahana tamin'i Jermaine Duprim sy ny lahatsorany So So Def izy. Nanoratra izy ary nanoratra ny hira "Dee Dah Dah (Sexy Zavatra)", izay niseho tao amin'ny feonkira ny sarimihetsika "Ry in Black". Ity no fandraisam-peo voalohany nalainy, saingy tsy navela ho toy ny tokana izy ary tapaka haingana ny fifanarahana. Tatỳ aoriana, dia nihaona Clive Davis, izay nanao sonia azy ho "Arista Records", fa tatỳ aoriana mifamadika ny firaketana an-tsoratra azy manokana orinasa 'J Records. " Nosoratany ny hira "Rock wit U" sy "Miresaka mivantana", izay niseho tao amin'ny dian'ny "Shaft" sy "Dr. Dolittle 2 ". Navoakan'i Alicia avy eo ny rakikirany voalohany tao amin'ny 2001Hira ao amin'ny Minitra.
Hira ao anaty boky kely (2001)
Ity tahirin-tsary no andro voalohany amin'ny fivarotana (5. 2001 Jona) nivarotra mihoatra noho 50 000 sekely tamin'ny herinandro voalohany ny 235 000 sekely maneran-tany, ary mihoatra ny 12 tapitrisa. Izy io dia niantoka ny lazany tany Etazonia sy tany ivelany. Tany amin'ny tanindrazany, izy no lasa mpividy vaovao tsara indrindra tamin'ny 2001 (sy ilay mpanakanto R & B tsara indrindra). Ny "Fallin 'tokana voalohany" dia enim-bolana teo an-tampon'ilay tabilao navoakan'ny Billboard Hot 100. Ao amin'ny "Amerika: Hira ho an'ny Mahery fo", izay fampisehoana tombony natao ho an'ny hetsika 11. Alahady 2001, Alicia dia nanao ny hira Donny Hathaway "Indray andro any isika rehetra dia ho afaka". Ny iray hafa, "Ny vehivavy iray mendrika," dia tonga tao amin'ny US top 10. Nahazo valisoa Grammy dimy tamin'ny alàlan'ny 2002 i Alicia, anisan'izany ny Award Newcomer Award sy ny hiran'ny taona ho an'ny Fallin 'Song. 22. October 2002 namoaka rakikiraNofoanana ary nopotehina tao amin'ny vitsy an'isa, fanoherana fotsyHira ao amin'ny Minitra, izay misy remix valo sy fito dikan-teny tsy misy dikany avy amin'i Alicia voalohany.
Ireo mpitsikera dia niresaka momba ilay rakikira tamin'ny fomba tsara. Afaka nifamotoana ny feo 70 i Alicia. toa an'i Curtis Mayfield, Marvin Gaye sy Stevie Wonder, ary feo vaovao hip-hop toy ny Lauryn Hill, Erykah Badu ary D'Angelo.
Ny Diary of Alicia Keys (2003)
Namoaka rakikira ho an'ny iray hafa izyDiary of Alicia Keysnavoakan'i 2. Desambra 2003. Nitsikera ilay rakikira ary izy no voalohany tany Etazonia. Tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny fivarotana, namidiny tamin'ny 618 000 ny ampahany, fivarotana fahenina avo indrindra ho an'ny mpanakanto sy ny mpivarotra faharoa amin'ny mpanakanto R & B. Hatreto, 9 dia namidiny tamin'ny olona an-tapitrisany. Singles "Tsy Fantatrao ny Anarako" sy "Raha Tsy Ianao no Misy Anao" dia niditra tao amin'ny top5 sy "Diary" tokana tao amin'ny top10. Ny "Karma" tokana ihany no nanao azy io ho amin'ny roapolo ambin 'ny folo, saingy tao amin'ny "Top 40 Mainstream" dia nisy ny 3. toerana. Ny tokana "Raha tsy mahazo anao" no lasa voalohany nijanona tao anatin'io diabeta ioBillboard Hot R & B / Hip-Hop Songsmihoatra ny herintaona mahery, mihoatra ny hira "Your Child" nataon'i Mary J. Blige. Nanjary lasa mpanakanto malaza X & amp;
Prices amin'ny "MTV Video Music Awards 2004" nahazo ny loka ho an'ny tsara indrindra R & B lahatsary (Raha Tsy Voaray ianao), ary izany koa no nahazo loka, herintaona taty aoriana noho ny lahatsary "Karma". Ao amin'ny Grammies 2005 nanao "Raha Tsy Voaray ianao", ary koa niaraka Jamie Foxx sy Quincy Jones, ary izy ireo niara-nihira ilay hira "Georgia an-tsaiko", nanao malaza amin'ny Ray Charles. Tamin'io takariva io, dia nahazo Alicia efatra mari-pankasitrahana sy ny tsara indrindra R & B Album, Best feo Performance (Fa raha I Tsy Voaray ianao), Best R & B Hira ( "Tsy fantatrareo My Name") sy Best feo R & B fampisehoana Duo na vondrona ho ilay hira hoe "My Boo," izay hirainy miaraka amin'i Usher. Ny loka nomena azy saingy tsy nahazo azy ireo ny rakitsarin'ny taona, raha tsy mahazo anao aho.
Tamin'ny fampisehoana tany Lisbonne tamin'ny 2008
14. Jolay 2005 nilalao tao amin'ny MTV Unplugged tao amin'ny Akademian'ny Mozika Brooklyn. Nandritra io fampisehoana io dia nilalao ny hirany izy, izay nomeny azy tamin'ny fomba hafa, ary nihira sobika maro koa izy. Anisan'ny mpanatrika ny mpanakanto izay nanao azy niaraka tamin'io fampisehoana io. Izy ireo dia Rapper Common, Mos Def, Damian Marley ary sangisangy Maroon 5 Adam Levine (miaraka amin'ilay hira nataony hoe "The Rolling Stones" Wild Horses).
Nihira ilay hira hoe "The Little Bit Hurts", izay nampihira an'i Aretha Franklin na Brenda Holloway indray mandeha. Navoakany koa ny hirany vaovao mahagaga: "Nangalatra fotoana", izay nosoratany niaraka tamin'ny mpamokatra Lamont Green sy "Unbreakable", izay tao amin'ny 4. toerana ao amin'ny tabilaotakelakaR & B / Hip-Hop, ary ny toerana faha-37 amin'ny Billboard Hot 100. Ao amin'ny tabilaotakelakaAdult R & B ny laharana voalohany dia naharitra roa ambin 'ny folo herinandro. Ny fampisehoana manontolo dia navoakan'ny 11. October 2005 amin'ny CD sy DVD ary nomena anarana tsotraUnplugged. Ao amin'ny tabilaotakelaka200 no laharana voalohany ary 196 000 dia nivarotra tamin'ny herinandro voalohany amin'ny varotra. Nandritra izany fotoana izany, tapak'andro tapitrisa no namidy ho azy tany Etazonia. Ny fampisehoana tsy tapaka azy dia ny fampisehoana mahomby indrindra an'ny MTV Unplugged hatramin'ny Nirvana. I atolotry nandritra ny efa-Grammy Awards - Best Vehivavy feo R & B Performance (fa nohamafisiny), Best feo Performance - nentim-paharazana R & B (fa ny hoe izaho no ny vehivavy), Best R & B Song (miovaova) sy ny tsara indrindra R & B Album.
Ny Election of Freedom (2009)
Alicia na American Music Awards 2009
Ny rakitsary an-tariby faharoa The Element of Freedom dia navoaka tamin'ny volana desambra 2009. Ny album dia faharoa tao amin'ny tabilao amerikanina Billboard 200 ary namidy 417 arivo tapitrisa ho an'ny herinandro voalohany amin'ny varotra. Ity rakikira ity ihany koa no voalohany ho eo an-tampon'ilay Diary britanika.
Nahavita horonantsary izy, anisan'izany i Ben Affleck, Ray Liotta, Common, Andy Garcia, Jeremy Piven ary Ryan Reynolds,Smokin 'Aces. Niseho tao amin'ny sinema ny 26. Janoary 2007. Izany dia noresahan'ilay mpamono olona Georgie Sykes. Nidera azy ny mpiara-miasa taminy, nilaza i Ryan Reynolds fa niasa ara-dalàna izy ary gaga fa tsy mbola nijery filma mihitsy izy talohan'izay.
Ankoatra izany dia vitany ny sarimihetsika faharoaNy Diny Diariesmiaraka amin'i Scarlett Johansson. Ny namany akaiky indrindra dia tao amin'ilay sarimihetsika.
Niaraka tamin'i Jeff Robinson, talen'ny tantsaha, dia nanao sonia fifanarahana sarimihetsika izy, izay hahatsikaritra ny "Bell, Book and Candle" an'ny 1958. Hisy mpamosavy ao.Niaraka tamin'i Robinson izy koa dia nanangana ny orinasan'ny fahitalavitra "Big Pita".Ny tetikasany voalohany dia ho andian-tantara mifototra amin'ny fahatsiarovan'i Alice ny fahazazana amin'ny maha-mulatka mipetraka any New York City.
Ao amin'ny sarimihetsikaNy singa amin'ny mainty sy fotsydia hilalao ankizivavy iray izay tena manan-talenta amin'ny fanaovana piano.Horonantsary miorina amin'ny biography of Philippe Schuyler.
Tamin'ny fampisehoana tao Tokyo tao amin'ny 2008
Izy koa dia mandray anjara mavitrika amin'ny fiantrana. Izy no mpitondratenin'ny Keep and Child Alive, fikambanana tsy miankina iray izay manome fanafody ho an'ny fianakaviana Afrikana izay voan'ny SIDA. Alicia voasoratra miaraka amin'ny mpihira Bono U2 ny rakotra fanaovam-panavotana 'ny hira "Aza omena Up" (voalohany nataon'i Peter Gabriel sy Kate Bush) ny tamin'ilay fotoana World SIDA Andro in 2006. Coververze, na izany aza, nahazo anarana hafa kely ary "Do not Give Up (Africa)". I Alicia sy Bono dia naniry nanamarika fa i Afrika irery no manana dimy amby roapolo tapitrisa voan'ny SIDA, ary olona 40 tapitrisa manerantany.
Nitsidika firenena tahaka an'i Oganda, Kenya ary Afrika Atsimo izy mba hanohana ny fikarakarana ny zaza mitondra ny SIDA. Amin'ny maha ambasadaoro sy mpiara-manorina ny "Keep a Child Alive". Izy koa dia lasa mpitondra tenin'ny Frum tha Ground Up, fikambanana mpanao asa soa izay manentana sy manohana tanora tanora amerikana mba hahomby amin'ny lafiny rehetra. Alicia koa dia nandray anjara tamin'ny hetsika isan-karazany amin'ny maha-olona tao amin'ny 2005. Tamin'ny volana Jolay izy dia nanao tao Philadelphia tao amin'ny Live 8 konsoza eran-tany. Ny tanjon'ireny fampisehoana ireny dia ny fampitandremana ny fampihenana ny fahantrana any amin'ireo firenena Afrikana ary ny hanery ireo solontenan'ny G8 hamela ny trosan'ny afrikana. Tamin'ny volana Aogositra, 2005 dia nanao fampisehoana ho an'ny tombonyReAct Ankehitriny: Music & Relief, izay nandefa ny fampielezam-peo mozika. Ny tanjona dia ny hanangonam-bola amin'ny rivo-doza Katrina. Herintaona taty aoriana dia nandeha nanao fampisehoana mahaliana toy izany izyFialofana avy amin'ny rivo-doza: fampisehoana ho an'ny Gulf Coast. Tamin'ny volana Jolay, 2007 dia nihira tao amin'ny Live Earth tany New Jersey.
karazana verinia (Ilaina)